Semalt: के प्रोम्प्ट क्लाउड अन्य वेब स्क्र्यापिping सेवाहरू भन्दा राम्रो छ?
डाटा साइंसले भर्खरको चलनहरू पहिचान गर्न भविष्यको भविष्यवाणी गर्न यसको क्षमताले विश्व परिवर्तन गर्दैछ। विभिन्न वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू हालका महिनाहरूमा सुरू भएका छन्, तर प्रम्प्टक्लाउड सबैभन्दा प्रख्यात र शक्तिशाली हो।
प्रम्प्टक्लाउडको साथ, तपाईं सजिलैसँग धेरै वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरू ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ र वास्तविक समयमा डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले तपाईंको वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिका लागि सजिलो बनाउँदछ। यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि कम-गुणवत्ताको वेब स्क्र्यापि services सेवाहरूले उच्च आवृत्तिमा डाटा निकाल्दछन्। यसको विपरित, प्रोम्प्टक्लउडले तपाईंलाई दुबै डाईनामिक र साधारण वेब पृष्ठहरूबाट डेटा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ गुणवत्तामा सम्झौता नगरी। थप, यो उपकरणले तपाईंको सामग्रीमा सबै व्याकरणीय र हिज्जे त्रुटिहरू ठीक गर्दछ, तपाईंलाई पढ्न योग्य र स्केलेबल परिणामहरू प्रदान गर्न। एक पटक डाटा पूर्ण स्क्रयाप भयो, तपाईं यसलाई JSON, CSV वा XML ढाँचामा यसको अन्तर्क्रियात्मक एपीआई बाट डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं तपाईंको FTP वा Amazon S3 खातामा स्क्र्याप गरिएको सामग्री अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोम्प्टक्लाउडले तपाईंलाई उपयोगी सामग्री गुगल ड्राईव, Box.net वा Dropbox मा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्य वेब स्क्र्यापि services सेवाहरू:
Import.io एक अन्तर्क्रियात्मक र अद्वितीय वेब स्क्र्यापिंग सेवा हो। यो सब भन्दा राम्रो यसको उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को लागी परिचित छ कि तपाइँ आराम संग वेब पृष्ठहरु को एक ठूलो संख्या बाट डेटा स्क्र्याप गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। Scraped जानकारी CSVA लाई निर्यात गर्न सकिन्छ केवल केहि क्लिकहरुका साथ, र तपाईले कोडको कुनै लाइन लेख्नु पर्दैन यो सेवा प्रयोग गर्नका लागि। यसको सट्टामा, Import.io सँग एपीआईको संख्या छ तपाईंको काम सजिलो पार्न र मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ हरेक दिन धेरै डाटा ल्याउन। Import.io को नि: शुल्क अनुप्रयोग लिनक्स, म्याक ओएस एक्स, र विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ।
Import.io जस्तै, Webhose.io एक राम्रो विकल्प पनि प्रम्प्टक्लाउड हो। यसले २०० भन्दा बढी भाषाहरू समर्थन गर्दछ र आरएसएस, JSON, CSV र XML ढाँचाहरूमा आउटपुट डाटा बचत गर्दछ। यो वास्तवमै ब्राउजरमा आधारित अनुप्रयोग हो जुन वेब पृष्ठहरूको ठूलो स index्ख्या अनुक्रमणिकामा एक अद्भुत वेब क्रलिling्ग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। साथै, यो तपाईंको काम सजिलो गर्न एक एपीआई छ र प्रति महिना १००० वेब स्क्र्याप अनुरोधहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
Dexi.io, जसलाई क्लाउडस्क्र्याप पनि भनिन्छ, इन्टरनेटमा एक उत्तम र सबैभन्दा प्रसिद्ध वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू मध्ये एक हो। यसले तपाइँलाई एक पटकमा बहु वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ र आउटपुटमा सबै हिज्जे त्रुटिहरू ठीक गर्न ब्राउजर-आधारित सम्पादकको साथ आउँदछ। क्लाउडस्क्र्यापको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये यो एक हो कि यसले अज्ञात डेटा निकाल्ने विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र हाम्रो पहिचान लुकाउन प्रोक्सी सर्भरहरूको एक ठूलो संख्या छ। यसको नि: शुल्क संस्करण सीमित संख्याका विकल्पहरूको साथ आउँदछ, तर यसको भुक्तान गरिएको संस्करणले तपाईंलाई एक घण्टामा सयौंदेखि हजारौं वेब पृष्ठहरूमा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिनेछ र यसको लागत month २ प्रतिमाह हो।
के प्रम्प्टक्लाउड अरूहरू भन्दा राम्रो छ?
निस्सन्देह, प्रोमप्ट क्लाउड डाटा स्क्र्यापि and र वेब क्रलिंगमा अग्रगामी हुन्। यो दुबै पेशेवर र गैर-पेशेवरहरूको लागि उपयुक्त छ र कुनै प्राविधिक ज्ञान वा कोड लाइनको आवश्यकता पर्दैन। कच्चा डाटा स्वचालित रूपमा तपाइँको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित र संरचित छ, र PromptCloud आधारभूत देखि उन्नत वेब स्क्र्यापिंग कार्यहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ।